Forex mgbanwe udu emelitere: 11/04/2021 08:15
Yuan - Nigerian naira price ugbu a na Forex mgbanwe ahịa na 11 April 2021
08:15:20 (Forex ọnụego update na 59 Sekọnd)
1 CNY = 58.14 NGN
Ọnụego mgbanwe Forex nke yuan gaa Nigerian naira. 1 yuan ka 58.14 Nigerian naira na mgbanwe Forex. Ọsọ kachasị n'ịntanetị yuan ọnụego. Mmelite ọsọ ọsọ nke yuan ọnụego.
Forex trading chaatị Nigerian naira - Yuan -ebi, 11 April 2021
Forex trading chaatị renminbi Ka Nigerian naira -ebi, 11 April 2021
Iji lelee yuan ka Nigerian naira na Forex, anyị na-egosi ya na eserese. Ma yuan etowo ma ọ bụ daa ka a ga-ahụkarị na eserese Forex. Jiri òké iji họrọ oge kwesịrị ekwesị na eserese a wee chọpụta n ’ọnụego mgbanwe yuan na Forex n'oge a. Mmelite mgbanwe eserese eserese kwa sekọnd iri atọ ọ bụla.
Tọghata Yuan Ka Nigerian naira Yuan Ka Nigerian naira Ọnụego mgbanwe Yuan Ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
Online trading yuan (CNY) na- Nigerian naira ugbu a
Kwa oge ọ bụla anyị na-achọpụta ihe yuan ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe. Uto nke yuan ( CNY) ka Nigerian naira n'oge nke a bụ - 0.0000 NGN. Tebụl ahụ na-egosi ọnụego yuan Nigerian naira ọnụego kwa nkeji. Ọ dabara adaba iji jiri mgbanwe mgbanwe ntụgharị ọnụ kwa nkeji.
58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14 58.14
Online trading yuan (CNY) na- Nigerian naira awa ikpeazụ trading
Enwere ike ilele mgbanwe mgbanwe ọnụego kwa elekere. Ọnọdụ ike nke yuan (CNY) na Nigerian naira n'oge elekere a. Ọnụego nke yuan nke Nigerian naira na-egosi na tebụl dị na ibe a. Ọ dabara adaba iji jiri mgbanwe mgbanwe ọnụego mgbanwe kwa elekere.
08:12 08:06 07:59 07:53 07:47 07:41 07:35 07:29 07:23 07:17
Online trading yuan (CNY) na- Nigerian naira taa na-emekarị 11 April 2021
08:15 07:14 06:14 05:14 04:14 03:14 02:14 01:14 00:13 23:13